देशभर बाढीपहिरोको बितण्डा : सरकारका मन्त्री १०१ किलोको माला लाउनै ब्यस्त ! - Kantipath.com
वर्षा अझै नरोकिएकाले प्रभावित र नदी तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा रहन आग्रह गरिएको छ। देशका विभिन्न नदीले सर्तकताको तह पार गरेका छन्। बाढीपहिरोबाट देशभर कहाँ–कहाँ क्षति गर्‍यो भन्नेबारे एकिन विवरण आईसकेको छैन। देशभर ६० भन्दा बढी ब्यक्ति बेपत्ता छन्, दर्जन जतिको मृत्यु भैसकेको छ । देशभर नागरिकको बिचल्ली हुँदा सरकारका मन्त्री भने सय किलोको माला लाउन ब्यस्त छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई गृहजिल्ला धनुषामा भव्य स्वागत गरिएको छ । मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला धनुषा आएका अरगरियालाई जसपाका युवा नेता राजेश यादवले १०१ किलोको मालाले स्वागत गरेका हुन् । जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका नेता, कार्यकर्ता र नेकपा एमालेका युवा नेताहरुले पनि उनलाई स्वागत गरेका छन् ।
जनकपुरको भानु चोकमा रहेको घर पुगेपछि उनलाई आफन्तले स्वागत गरेका थिए । घरमा १० मिनेट पनि नबसी उनी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले राखेको स्वागत कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनले जानकी मन्दिरमा पूजापाठ पनि गरेका छन् । मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा पार्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेका थिए ।
Previous Previous post: मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तीन दिने तालिम सम्पन्न
Next Next post: योगेशले शेयर गरेको किर्ते विज्ञप्ति झलनाथ खनालको नामबाट कसले निकाल्यो ?
‘शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को कार्यान्वयनप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको चासो
डिएसपी भाटको एक्सन : १० हजार लिटर अबैध मदिरा र लागु औषध नष्ट
नेपालमा भूमिगत यौन सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छन् थाहा पाउनुहाेस्